NYI LYNN SECK 18+ DEN: သန်းဝင်းလှိုင် ဘာလဲဘယ်လဲ
Posted by NLS at 2/16/2010 10:20:00 AM
18 Responses to “သန်းဝင်းလှိုင် ဘာလဲဘယ်လဲ”
Pyei Soan Win said...
It's reallyanice post. I agreed with you that it gonna have lots of problems if you have posted in one of magazine. But you should, there are lots of people in YGN who are not accessible to internet or blog.
For this statistic, you knew more than me.
For those young people, hard media like magazine is still the source of knowledge to them. We have been throug this. If we don't highlight it out or share ethic of work from global world, our nation will never be improved and developed.
I have watched your recent activities like barcamp YGN etc. This article might be good topic for next barcamp for young people.
You should guide them what is good model. If not, they will be copy cats and it will be disasters in few year.
I still remembered our Rock Hero, has thanks to Greatest Rocker in this whole copy album 15 yeras ago whether the original Singer is really acknowledged or not yet.
It is quite funny at that time but it is beauty of his work after I have read this post after all.
In conclusion, you should send it to one of youth educational magazine. I support you for this.
အင်မတန် ကောင်းတဲ့ Post လေးပါဘဲ..
သိသင့်တဲ့ အချက် အလက်တွေကို ရေးထားတယ်..
မဂဇင်းတွေ ကိုလဲ ပို့ သင့်တယ် လို့ထင်တယ်
ဒါ မှ အင်တာ နက် မရှိ သူတွေ ဘဲ ဖတ်လို့ ရမယ်
You should publish this post in the magazine.
ဒီလိုဆိုတော့ ဘလော်ဂ့်ပေါ်တင်ရင် တာဝန်မယူရဘူးတဲ့လား (ဖွလိုက်တာ)
ခင်ဗျားပြောတာအမှန်ပဲ..နိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့ကျောင်းတွေမှာ..အထူးသဖြင့် Graduate schools တွေမှာ
Intro to Grad Library Research ဆိုပြီး.
Citation တို့ Reference တို့ နဲ့ ပတ်သက်တဲ့
င်္format and style(APA style..) တွေအရင်သင်ရလေ့ရှိတယ်..အခုလို internet ခေတ်ကြီးမှာ ရေးသူေ၇ာ ထုတ်ဝေသူပါ ကြိုးစား
တာဝန်မယူဘူးဆိုတဲ့ စကား တစ်လုံးမှ မပာပာဘူး။ သူ့လို ကူးကြေးဆိုရင် ကျွန်တှော့ဆီမှာ လူငားထောင်ရဲ့ အတဿထုပဿပတဿတိတွေ ရှိပာတယ်။ မယုံရင် လာကြည့်လို့ရတယ်။ ကျွန်တှော ရေးသမျှဟာ ကျွန်တှောကိုယ်တိုင် Research လုပ်ပြီး သေချာ စစ်ဆေးပြီးမှ ရေးပာတယ်။ :)
ကိုညီလင်းဆက် တော်တော် ထောင့်စေ့တာပဲ..
ပိုစ်အသစ်မျှော်နေတာ .. ကျေးဇူး..
အမှန်တရားဟာ နားဝင်မချိူပေမယ့် အလွန်တန်ဖိုးရှိပါတယ်။ Plagiarism ကိုလည်း ဆန့်ကျင်ပါတယ်..။ တိုင်းပြည်အတွက် ကိုညီလင်းဆက်လို လူငယ်လူတော်တွေ အများကြီးပေါ်ထွန်းနိုင်ပါစေ ......
Self Plagiarism ဆိုတာလဲ ရှိသေးတယ်။ ဘယ်လိုလဲ ဆိုတော့ ကျွန်တော်က လောရှည်ဆိုတဲ့ ကလောင်နာမည်ရယ်၊ ရှည်လောဆိုတဲ့ ကလောင်နာမည်ရယ် ရှိတယ်ဆိုပါတော့။ အဲဒီမှာ လောရှည် နာမည်နဲ့ ရေးထားတဲ့ဟာတွေကို ရှည်လောနာမည်နဲ့ ရေးတဲ့စာအုပ်ထဲ ငါရေးတာပဲ ဆိုပြီး ကူးထည့်လို့ မရဘူး။ စနစ်တကျ ရည်ညွှန်းရမယ်။ မရည်ညွှန်းရင် Self Plagiarism ဖြစ်တယ်။
ဒါဆိုရင် နောက်အတွဲတွေမှာ ဒီအချက်တွေကို ဆင်ခြင်မယ်လို့ ယူဆတယ်။
စာအုပ်ထုတ်ပြီးမှဆို တည်မိတဲ့ဘုရား ဖြစ်သွားပြီ။
မှန်၏ အမှန်က မဂ္ဂဇင်းကို ပို့သင့်တာ.. ဘယ်သူမှမသိဘူးထင်ချင်ထင်နေမယ် ..
the best comment ever :)
@Aung Aung ကိုဖြေရှင်းတာလဲ မာနသံပါသလားလို့ ပါ..
Research Methodology ဆိုတာကျယ်ပြန့် ပါတယ်.. Blogger Survey တုံးက ကျွန်တော်
လည်းဝင်ဖြေခဲ့ပါတယ်..ဒါပေမဲ့ Survey Design
က Analysis အတွက်သိပ်မပြည်စုံဘူးလားလို့ 
I do luv U man..my Father bio is in there.. and i'm sure he copy it from myanmar encyclopedia ....i like the way u r standing on what u believe in.. Zin Lynn Set... see ya again